Архив телепередач Соты Духовные
Архив телепередач "Соты Духовные"
Долгое время по городскому семипалатинскому телевидению СТРК шла передача «Соты Духовные». Эта телепередача показывала выступления священников Воскресенского собора, в которых они раскрывали вопросы духовной жизни. Бессменным руководителем этих выпусков от государственного телевидения был очень разносторонне образованный человек - Занарин Федор Владимирович. Это была его авторская программа. К большому нашему сожалению, 15 июня 2013 года Федор Владимирович скоропостижно скончался от быстропрогрессирующей болезни.
Руководство телеканала СТРК любезно предоставило нам архив передач «Соты Духовные». И мы решили поделиться этим архивом с посетителями нашего сайта. Голос за кадром: Занарин Федор Владимирович.
На сайте архив будет пополняться постепенно.
5. Беседа с протоиереем Феодором Проскуриным о Великом Посте
4 - Беседа с клириком Воскресенского собора иереем Алексеем Конопацким о празднике Крещение Господне и о святках
<span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><span style="line-height: normal; text-align: left;"><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
3 - Беседа с протоиереем Феодором Проскуриным (настоятелем Воскресенского собора) "О Рождестве Христовом"
<span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><br /> <span style="font-size: 14px; color: #19799A;"><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
2 - Беседа с протоиереем Феодором Проскуриным (настоятелем Воскресенского собора) "О молитве"
Файл (для более быстрой загрузки) был поделен на две части.
… Имея опыт общения с Богом в храме, человек это состояние может перенести и на домашнюю молитву. В храме мы можем быть раз в неделю, а дома мы находимся постоянно. И от домашней молитвы очень много зависит благополучие и духовное состояние человека…
<span style="color: rgb(20, 97, 123); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(20, 97, 123); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(20, 97, 123); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(20, 97, 123); font-weight: bold;"><br /></span></span></span></span>
…Более того, бывает такие случаи, когда человек вообще не может сосредоточиться на молитве,... разные обстоятельства в жизни. Тогда просто рекомендуется встать, совершить три земных поклона и прочитать небольшие краткие молитвы, но искренно, от души и не пытаться заставлять себя исполнять такое молитвенное правило, к которому ты сейчас просто даже физически не будешь готов…
1 - Беседа с протоиереем Феодором Проскуриным (настоятелем Воскресенского собора) "О Заповедях Блаженства"
<span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><span style="font-weight: bold; color: #14617B;"><br /> <span style="font-size: 14px; color: #19799A;"><br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу «О заповедях блаженства»: ... Блаженство – надо подразумевать, как счастье. А счастье – это полнота жизни человека…. Заповеди блаженства – это есть те вехи, метки, путь, по которому человек должен прийти в тот мир, из которого пришел Сам Христос. Но так как говорить о том мир в этом языке нет слов, понятий, потому что там все не так, как здесь, в другом измерении, то Христос называет этот мир Царствием Божиим, называет его блаженным, целью жизни. Если внимательно читать эти Заповеди блаженства, то они...